Banyere Anyị - Qinyang Xianfeng egbochi ihe Co., Ltd
Qinyang Xianfeng mkpuchi Ihe Plant na-hiwere na 1994. Anyị na-pụrụ iche na-mmepụta, ire na ọrụ nke mkpuchi ihe onwunwe. Kwa afọ ike ekpuchi 10000 metric tọn ngwaahịa nke electric mejupụtara ihe na ọtụtụ ijeri mkpuchi aka uwe. Dupont Company bụ anyị ọlaedo soplaya Nomex ngwaọrụ. Kemgbe ọtụtụ afọ mmepe, anyị nwe elu technology akara ngwa maka producting elu àgwà abụọ, atọ na anọ oyi akwa mejupụtara ihe.
anyị isi na ngwaahịa ndị Pioneer ika-egbochi ihe ihe na-elu àgwà na kacha mma ọrụ, tinyere electric-egbochi ihe mejupụtara akwụkwọ usoro na-egbochi ihe uwe usoro.
Ọdụdọ mgbanwe mejupụtara-egbochi ihe akwụkwọ usoro: 6640NMN, 6650NHN, 6641 F KLAS DMD, 6630 DMD.
Egbochi ihe uwe usoro: 2715 faiba glaasi egbochi ihe aka uwe, silicone egbochi ihe aka uwe.
Anyị factory nwere ISO9001: 2000 Certified Quality System. Anyị na ngwaahịa na e certificated site Mankeumman nke USA na RoHS site Euro Union. The Pioneer Brand bụ ọdịda ama ika site Henan Government. Anyị na-na-na High Quality Product Nrite, tupu Enterprise Nrite si Henan Government.
Na anụ ụlọ ahịa, anyị nwere ihe karịrị 200 ndị ahịa. Anyị bụ ndị na-okwu (karịa afọ 15) ọlaedo soplaya Xi'an Sima Motor Co., Ltd., Wolong Electric Nanyang Bọmbụ gbawara agbawa Protection Co., Ltd., Lanzhou Motor Co., Ltd. All n'ụwa, anyị na ngwaahịa na-tumadi exported na United States, European Union, Middle East, Southeast Asia, Africa na Hongkong wdg
Qinyang Xianfeng egbochi ihe Matearial Factory nwere olileanya iru azụmahịa mmekọrịta gị na ezi obi na-anabata ndị ahịa si n'elu ụwa ileta anyị factory!